May 2019 - Page 2 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
May 25, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay masuuliyada dilka askar Puntland ah, sida lagu sheegay bayaan Jimcadii la soo mariyay wakaalada wararka ISIS ee Acmaaq. Weerarka ka dhanka ahaa askarta ayaa fiidnimadii Khamiista ka dhacay magaalada […]
May 24, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Maamul cusub ayaa loo magacaabay isbitaalka guud ee magaalada Garoowe. Dr Xabiibo Nuux Ismaaciil ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee sibitaalka guud ee Garoowe, sida lagu sheegay digreeto ku taariikheynayd 22-ka May oo […]
May 24, 2019 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Washington ayaa kordhisay duqeymaheeda ka dhanka ah kooxda ISIS ee ku sugan gudaha Puntland labadii bilood ee lasoo dhaafay. Qiyaastii 20 maleeshiyo ah ayaa lagu dilay duqeymaha Mareykanka ee gudaha Puntland ka dhacay, […]
Garowe-(Puntland Mirror) Washington has increased its airstrikes against ISIS militant group in Puntland state of Somalia over the last two months. About 20 militants were killed in the US airstrikes in Puntland, according to statements […]
May 23, 2019 Puntland Mirror 0
GAROWE, PUNTLAND 23 May 2019: Just one in four children in Puntland, Somalia, have access to sufficient food, a new assessment by Save the Children reveals today[i]. These children are far more likely to succumb to […]
Labo katirsan maleeshiyada ISIS oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Labo katirsan maleeshiyada ISIS ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Puntland, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka ee Afrika maanta oo Khamiis ah. Duqeynta ayaa Arbacadii ka dhacday Buuraha Golis, bayaanka ayaa […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Nin isa soo miidaamiyay ayaa lagu qabtay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud maanta oo Khamiis ah, sida ay wararku sheegeen. Ninka ayaa la sheegay in uu doonayay in uu isku qarxiyo munaasabad ka […]
May 22, 2019 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa kasoo horjeestay heshiiska shidaalka ee Soomaaliya. Kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo maanta oo Arbaco ah madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug, ayay kaga soo horjeesteen sharciga. “Dowladaha Puntland […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirkii hore arrimaha dibada ee Soomaaliya Xuseen Ceelaabe Faahiye ayaa ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho maanta Arbaco ah, sida lagu sheegay waraaq tacsi ah oo ka soo baxday wasaaradda […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Kulan u dhaxeeya madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa maanta oo Arbaco ah ka dhacay xarunta madaxtooyada dowladda Puntland ee magaalada Gaalkacyo, sida madaxtooyada Puntland ay ku sheegtay war-saxaafadeed. Labada dhinac ayaa ka wadahadlay […]